प्रधानमन्त्री ओली र बेलायतकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता | Matrisandesh
प्रधानमन्त्री ओली र बेलायतकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता
लन्डन । बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बेलायतकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । मेलेसँग मङ्गलबार लन्डनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ता गरेका हुन् ।
भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, लगानी तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका गुनासालगायत विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली,परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, बेलायतस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलगायत सहभागी थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती राजकुमार ह्यारीसँग पनि भेटबार्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले पनि छलफल गरेका छन् ।
एमाले सांसदको प्रश्न यो कस्तो प्रजातन्त्र हो सरकार ?
स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता
समाज परिवर्तनमा बिपीको सिद्धान्त महत्वपूर्णः नेता सिटौला
दशगजाका सीमास्तम्भ केही हराए, केही जीर्ण